အမေ့သားလေး.... @ mixxt
window admin အကောက် ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖျက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ....
အမေ့သား လေး နေဇော...
written on 20/09/2011
ကွန်ပျူတာတွေမှာ window log in password ပေးထားတတ်ကြပါတယ်. အဲ့လိုပေးထားတဲ့ နေရာမှာ တစ်ချို့က ပေးထားတဲ့ password ကို မေ့သွားလို့၊ တစ်ချို့က password ပေးထားတဲ့ စက်ကို မကြည့်ပဲ ၀ယ်မိလို့၊ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ admin password ပေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ၀င်လို့ရအောင် ပေးထားတဲ့ admin password ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ကြည့်ရအောင်. အရင်က ပေးထားတဲ့ နည်းက နည်းနည်းလေး အဆင့်များပါတယ်၊ လုပ်နည်းတွေ တောင်လိုပုံနေပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အထဲမှာမှ ဒီနည်းလေးက အကောင်းဆုံး၊ အမြန်ဆုံး၊ အလွယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ window xp| window vista | window7စတဲ့ window os အားလုံးရဲ့ password တွေကို ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version ပါ။ လုပ်နည်းကအစ ပြောပြပေးပါ့မယ်။
ပေးထားတဲ့ Download link ကနေ Reset Windows Password software ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။ ဖိုင်(၃)ဖိုင်ရလာပါလိမ့်မယ်။
အထဲကနေမှ ResetWindowsPwd.iso ဖိုင်ကို nero နဲ့ အခွေ Burn လိုက်ပါ။
အခွေ မ burn တတ်သူများအတွက်ကိုပါ ထပ်ပြောပေးလိုက်ပါ့မယ်။ အရင်ဆုံး nero တင်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် ရလာတဲ့ ResetWindowsPwd.iso ဖိုင်ကို Double click နှိပ်ပါ(Double click နှိပ်လို့မှ nero တက်မလာရင် ResetWindowsPwd.iso ဖိုင်ကို right click ထောက်ပြီး open with ကနေ nero express (or) nero burningroom ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ)
Nero တက်လာတာနဲ့ burn ကို နှိပ်ပြီးတော့ CD နဲ့ အခွေ ကူးထားလိုက်ပါ။
ရလာတဲ့ ဖိုင်(၃)ဖိုင်ထဲက keygen ကို Double click နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် Name အကွက်ထဲမှာ မိမိနာမည်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်မှာ နံပါတ် အလုံး(၂၀)ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ့ပေါ်လာတဲ့ မိမိနာမည်နဲ့ နံပါတ်ကို စာအုပ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခုနက ကူးထားတဲ့ CD မှာ ဖြစ်ဖြစ် ရေးပြီးမှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် register version မဟုတ်ဘူးဆိုရင် user account ကိုပဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ်. admin account ကို ပေးမဖွင့်ပါဘူး။ register version ဖြစ်မှသာ admin password ကို ပေးဖျက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မှတ်ထားခိုင်းတာပါ။ name အကွက်မှာ ဘာပဲရိုက်ထည့်ရိုက်ထည့် အဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့ နာမည်ရယ် အောက်ပါပေါ်တဲ့ နံပါတ် အလုံး(၂၀)ရယ်ကို မှတ်မိရင်ရပြီ။
အခုအခွေလဲ ကူးပြီးပြီ။ name and password ကိုလဲ မှတ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ admin password ပေးထားတဲ့ စက်တစ်လုံးဆီကို ခုနက အခွေယူသွားပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် Reset Windows Password CD ထည့်ပြီးတော့ boot တက်လိုက်ပါ။
Boot တက်လာရင် ခဏစောင့်နေလိုက်ပါ အားလုံးပြီးသွားရင် Reset Windows Password program ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပေါ်လာတဲ့အထဲက About ကို mouse နဲ့နှိပ်ပြီး ခုနက မှတ်ထားခဲ့တဲ့ Username နဲ့ Registration code အလုံး(၂၀)ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ok ကိုနှိပ်ပါ။
Administrator ကိုရွေးပြီးတော့ reset ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံး ပုံမှပြထားတဲ့ restart ကိုနှိပ်ပြီး ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အခွေပြန်ထုတ်ထားလိုက်ပါ။
၀င်းဒိုးတက်လာတာနဲ့ ၀င်မရတဲ့ admin account ၀င်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။
The author has edited this post (on 20/09/2011)